【 အလှအပနှငျ့ ကနျြးမာရေး 】သားအိမျပွငျပ သန်ဓတေညျခွငျး (Ectopic pregnancy) | Opinion Leaders
မ မြိုးဥ ovum နဲ့ ဖိုမြိုးဥ sperm လေးက Fallopian tube လို့ချေါတဲ့ သားဥပွှနျထဲမှာ သန်ဓအေောငျပွီး ဖွဈလာတဲ့ သန်ဓသေား embryo လေးဟာ uterus လို့ချေါတဲ့ သားအိမျထဲမှာ လာတှယျကပျ (implantation) လုပျရပါတယျ။ တနညျးအားဖွငျ့ သာမနျကိုယျဝနျဆောငျတှမှော သန်ဓသေားလေးဟာ သားအိမျအတှငျးမှာပဲ ရှိရပါတယျ။ Ectopic pregnancy ကတော့ သန်ဓသေားလေးဟာ သားအိမျအတှငျးမှာ ရှိမနဘေဲ သားအိမျပွငျပ တနရောရာမှာ ရှိနတောမြိုးပါ။
သားအိမျပွငျပ ဘယျနရောတှမှော သန်ဓတေညျလရှေိ့လဲ?
-၉၀ ရာခိုငျနှုနျးသော သားအိမျပွငျပ သန်ဓတေညျခွငျးတှကေ Fallopian tube လို့ ချေါတဲ့ သားဥပွှနျထဲမှာ ဖွဈတာပါ (Tubal pregnancy လို့ချေါပါတယျ) အခွားနရောတှဖွေဈတဲ့
-ovary (သားဥအိမျ) နဲ့
-abdominal cavity (ဝမျးဗိုကျအတှငျး) ဒီနရောတှမှောလညျး ဖွဈနိုငျပါတယျ။
-ယခငျက သားအိမျပွငျပ သန်ဓတေညျဖူးသူမြား (Previous ectopic pregnancy)
-လိငျမှတဆငျ့ ကူးစကျတတျသောရောဂါ (Gonorrhea, Chlamydia) ရှိသူမြား
- ဖနျပွှနျသန်ဓသေား ကိုယျဝနျဆောငျသူမြား (In vitro fertilization)
-သားဥပွှနျ ခှဲစိတျမှုခံယူထားသူမြား (Tubal surgery)
-သားအိမျတှငျး ပစ်စညျး (IUCD) ထညျ့ခွငျးဖွငျ့ သန်ဓတေားထားသူမြား
၁၀ရာခိုငျနှုနျးသော ectopic pregnancy တှကေ လက်ခဏာသိပျမပွတတျပမေယျ့ ကိုယျဝနျဆောငျကာလ အစောပိုငျးမှာ-
- သှေးဆငျးခွငျး (light vaginal bleeding)
-ဗိုကျအောငျ့ခွငျး (Lower abdominal pain)
-ဆီးစပျအောငျ့ခွငျး (Pelvic pain) ဒီလို လက်ခဏာတှနေဲ့ လာတတျပါတယျ။
နောကျဆကျတှဲအနနေဲ့ကတော့ သားအိမျပွငျပမှာ ဖွဈတဲ့ သန်ဓသေားလေးက ပေါကျထှကျခွငျး (Rupture of Ectopic pregnancy) ပါ။ ဒီလိုဖွဈခဲ့ရငျတော့ သှေးဆငျးခွငျးနှငျ့ ဗိုကျအောငျ့ခွငျးအပွငျ
- သတိလဈခွငျး စတဲ့ လက်ခဏာတှတှေရေ့မှာပါ။ ဒီလက်ခဏာတှရှေိရငျတော့ အသကျအန်တရာယျစိုးရိမျရတာကွောငျ့ ခကျြခငျြး အရေးပျေါ ဆေးရုံ ဆေးခနျးသှားသငျ့ပါတယျ။
ကိုယျဝနျဆောငျကာလ အစောပိုငျးမှာ ဗိုကျအောငျ့ခွငျး သှေးဆငျးခွငျး စတဲ့ လက်ခဏာတှရှေိတာနဲ့ အာထရာဆောငျးရိုကျခွငျး၊ သှေးစဈခွငျး (beta hcG ပမာဏစဈဆေးခွငျး) ဖွငျ့ ရောဂါရှာဖှနေိုငျပါတယျ။ methotrexate လို့ချေါတဲ့ ဆေးပေးနိုငျသလို ပေါကျထှကျသှားရငျတော့ အရေးပျေါခှဲစိတျဖို့လိုမှာပါ။
မ မျိုးဥ ovum နဲ့ ဖိုမျိုးဥ sperm လေးက Fallopian tube လို့ခေါ်တဲ့ သားဥပြွန်ထဲမှာ သန္ဓေအောင်ပြီး ဖြစ်လာတဲ့ သန္ဓေသား embryo လေးဟာ uterus လို့ခေါ်တဲ့ သားအိမ်ထဲမှာ လာတွယ်ကပ် (implantation) လုပ်ရပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် သာမန်ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေမှာ သန္ဓေသားလေးဟာ သားအိမ်အတွင်းမှာပဲ ရှိရပါတယ်။ Ectopic pregnancy ကတော့ သန္ဓေသားလေးဟာ သားအိမ်အတွင်းမှာ ရှိမနေဘဲ သားအိမ်ပြင်ပ တနေရာရာမှာ ရှိနေတာမျိုးပါ။
သားအိမ်ပြင်ပ ဘယ်နေရာတွေမှာ သန္ဓေတည်လေ့ရှိလဲ?
-၉၀ ရာခိုင်နှုန်းသော သားအိမ်ပြင်ပ သန္ဓေတည်ခြင်းတွေက Fallopian tube လို့ ခေါ်တဲ့ သားဥပြွန်ထဲမှာ ဖြစ်တာပါ (Tubal pregnancy လို့ခေါ်ပါတယ်) အခြားနေရာတွေဖြစ်တဲ့
-ovary (သားဥအိမ်) နဲ့
-abdominal cavity (ဝမ်းဗိုက်အတွင်း) ဒီနေရာတွေမှာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
-ယခင်က သားအိမ်ပြင်ပ သန္ဓေတည်ဖူးသူများ (Previous ectopic pregnancy)
-လိင်မှတဆင့် ကူးစက်တတ်သောရောဂါ (Gonorrhea, Chlamydia) ရှိသူများ
- ဖန်ပြွန်သန္ဓေသား ကိုယ်ဝန်ဆောင်သူများ (In vitro fertilization)
-သားဥပြွန် ခွဲစိတ်မှုခံယူထားသူများ (Tubal surgery)
-သားအိမ်တွင်း ပစ္စည်း (IUCD) ထည့်ခြင်းဖြင့် သန္ဓေတားထားသူများ
၁၀ရာခိုင်နှုန်းသော ectopic pregnancy တွေက လက္ခဏာသိပ်မပြတတ်ပေမယ့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလ အစောပိုင်းမှာ-
- သွေးဆင်းခြင်း (light vaginal bleeding)
-ဗိုက်အောင့်ခြင်း (Lower abdominal pain)
-ဆီးစပ်အောင့်ခြင်း (Pelvic pain) ဒီလို လက္ခဏာတွေနဲ့ လာတတ်ပါတယ်။
နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ကတော့ သားအိမ်ပြင်ပမှာ ဖြစ်တဲ့ သန္ဓေသားလေးက ပေါက်ထွက်ခြင်း (Rupture of Ectopic pregnancy) ပါ။ ဒီလိုဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ သွေးဆင်းခြင်းနှင့် ဗိုက်အောင့်ခြင်းအပြင်
- သတိလစ်ခြင်း စတဲ့ လက္ခဏာတွေတွေ့ရမှာပါ။ ဒီလက္ခဏာတွေရှိရင်တော့ အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရတာကြောင့် ချက်ချင်း အရေးပေါ် ဆေးရုံ ဆေးခန်းသွားသင့်ပါတယ်။
ရောဂါရှာဖွေခြင်း နှင့် ကုသခြင်း
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလ အစောပိုင်းမှာ ဗိုက်အောင့်ခြင်း သွေးဆင်းခြင်း စတဲ့ လက္ခဏာတွေရှိတာနဲ့ အာထရာဆောင်းရိုက်ခြင်း၊ သွေးစစ်ခြင်း (beta hcG ပမာဏစစ်ဆေးခြင်း) ဖြင့် ရောဂါရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။ methotrexate လို့ခေါ်တဲ့ ဆေးပေးနိုင်သလို ပေါက်ထွက်သွားရင်တော့ အရေးပေါ်ခွဲစိတ်ဖို့လိုမှာပါ။